Shaver Usoro Alfa bụ kọmpat, obere akụkụ proveresional shaver nke nwere ike ijikwa ọrụ ndị bụ isi maka nlekọta ihu. Ọzọkwa ngwaahịa nke na-enye azịza maka ịdị ọcha na ụzọ dị mma jikọtara ya na ihe eji achọ mma. Mfe, minimalism na arụmọrụ jikọtara ya na ọrụ mmekọrịta dị mfe na-ewulite isi mmalite nke ọrụ ahụ. Ahụmahụ ndị na-enye ọ Joyụ bụ isi ihe. Enwere ike iwepụ ndụmọdụ dị mfe na shaver ma tinye ya na ngalaba nchekwa. Edobere ebe a iji wee chaji wee na-asachapụ ma na-asachapụ ndụmọdụ ndị ejiri UV Light na-enweta n'ime ngalaba nchekwa.
Satọdee 11 Septemba 2021
Tọọzdee 9 Septemba 2021
Wenezdee 8 Septemba 2021
Tiuzdee 7 Septemba 2021
Opx2 Nwụnye Optic Satọdee 18 Septemba
Vivit Collection Ọla Ntị Na Mgbanaka Fraịdee 17 Septemba
FinaMill Igwe Nri Kichin Mara Mma Tọọzdee 16 Septemba
Shaver Ngwaọrụ Eji Arụ Ọrụ Ọtụtụ Pusi Bed Ngwa Ngwa Egbugbere Ọnụ Eke Dịkarịsịrị Mma Okpete Ụlọ Nkịta Na-Abụ Nkịta